Maxay yihiin siyaabaha loo go'aamiyo dhibcaha dhabarka?
Maqaalkani wuxuu u taagan yahay mawduuca tayada xiriirka. Waxaan ka hadli doonaa siyaabaha sida Google u qiimeynayo tayada xiriirrada soo socda iyo sida aad u cabbiri karto tayada xiriirka ee dhisidda xiriiriyahaaga. Muuqaalkan wax ku oolinta mashiinka raadinta waa aasaas u ah abuuritaanka xiriir tayo oo tayo leh. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan helitaanka juice-ka tayada leh ee boggaaga. Marka hore, waxaad kor u qaadi doontaa maamulka calaamadda ee gudaha suuqa iyo shabakadda guud ahaan. Waxaa intaa dheer, backlinks dofollow leedahay juice link to your site. Haddii ay ka yimaadaan ilaha websaydhka sareeya, waxay kor u qaadi karaan boggaaga boggaaga iyo soo jiidashada badan oo macaamiisha cusub ah.
Waa lagama maarmaan in la ogaado tayada xiriiriyeyaasha ee tilmaamaya boggaaga sababtoo ah asxaabyadani waxay u adeegaan darajo liis ah waxayna kari karaan hagaajinta boggaaga bogga natiijada raadinta ama burburiyaan dhamaan dadaalkaaga SEO. Maalmooyinkayaga, ma ahan dhammaan dhabarka si isku mid ah loola dhaqmo. Waxaa jira waxyaabo badan oo isbaaroyin iyo khiyaamo kuwaas oo isku dayaya inay ciyaaraan matoorada raadinta iyo helitaanka isku xirnaanta noocyo kala duwan oo aan ahayn dabiiciga ah. Halkii lagu xisaabi lahaa tirada xiriirada dibadda ee tilmaamaya bogga internetka, Google sidoo kale wuxuu qiimeeyaa tayada xiriirrada soo socda. Dhab ahaantii, Google waxay ku xisaabtamaysaa awoodda, udubdhexaadka, booska, iyo tifaftirka tifaftirka dhamaan isku xirayaasha tilmaamaya boggaaga.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay si taxadar leh u baari lahayd mustaqbalka isku-xirnaanta maadaama xiriirada xuni ay dhaawici karaan sumcaddaada caanka ah waxayna sababi karaan hoos u dhac qiimeyn. Google ayaa ciqaabaya ilaha webka ee jabiya Tilmaamayaasha Websaydhka leh tayadoodu hooseeyso, xidhiidhada spammy. Taasi waa sababta oo ah haddii aad ogaatay qaar ka mid ah tayada hoose ee tayada soo socda ee tilmaamaya boggaaga, waa inaad ku hirgelisaa qalab Google Google ah si aad uhesho iyaga oo aan labadaba raadineyn boodhadhka iyo isticmaalayaasha.
Aan ka falanqayno qaababka ay Google u adeegsaneyso si loo go'aamiyo dhibcaha dhabarka.
Qodobada lagu xisaabtamo Google marka la go'aaminayo dhibcaha dhabarka.
Domain Authority, maamulka bogga iyo PageRank
Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee lagu ogaanayo tayada xiriirada soo galaya waa awooda ilaha webka kuwaas oo ay yimaadaan. Nidaamka PageRank wuxuu ku salaysan yahay sifo isku xirnaanta iyo isku-xirnaanta isku xirka. Xoogga sare ee maamulka goobta, juice isku-dhafan oo aad u qiimo badan waxaad ka heli doontaa gadaal.
Si aad u xisaabiso awoodda bogga ama ilaha webka, waxaad isticmaali kartaa Analyteth Web Site ama Moz Tool. Iyadoo gacan ka heleysa qalabkan, waxaad go'aan ka gaari kartaa Domain Authority iyo Author Authority ee ilaha webka. URL kasta oo la siiyo, waxaad heli doontaa dhibcood laga bilaabo 1 ilaa 100. Heerarka sare ayaa ah, waa qiimaha ugu qiimaha badan.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka hubin kartaa awoodda xiriirrada soo socda, iyadoo la adeegsanayo softwareka Majestic SEO. Barnaamijkan wuxuu ku siin doonaa jaangooyooyin sida "Flow Flow" iyo "Citations duplication. "Meel adag, xayeysiisyadaasi waxay ku tusi doonaan xidhiidh xiriiriyaha URL ah. Heerka sare ee labadan heer ayaa ah, xiriirka qiimaha badan ee ka socda meeshan ayaa noqon doona. Qodobka 1aad
Qodobbada nuxurka ama shabakadda
ayaa la dhigaa. Waxaa lagu sharxi karaa ujeedada koowaad ee Google in ay bixiso tayada oo keliya tayada sare, laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay natiijooyinka raadinta user ee su'aalaha.
Google wuxuu qiimeeyaa muhiimadda ugu muhiimsan ee ilaha webka iyada oo loo marayo isku-xidhkiisa iyo fariimaha qoraalka ee xiriiriyahan. Taasi waa sababta aad u baahan tahay in aad si gaar ah ugu fiirsato qodobka qoraalkaaga. Isticmaal magacaaga calaamaddaada ama erayga muhiimka ah ee muhiimka ah sida text for a link for your link.
Dib u helidda ilaha webka ee khuseeya oo si dhow ula macaamilaya mawduuca domainkaaga ayaa kor u qaadi doona booska boggaaga ee shuruudaha khaaska ah Source .